Ogaden News Agency (ONA) – Sarkaalki heystay Jig Jiga oo la shegay in Addis Ababa loo dhaadhiciyay
Sarkaalki heystay Jig Jiga oo la shegay in Addis Ababa loo dhaadhiciyay
Posted by ONA Admin	/ September 22, 2012
Warar sir ah oo aad u hoosey oo soo gaadhay wakaalada wararka Ogadeniya ayaa sheegaya in magaalada Jig Jiga mar labaad ay soo gaadheen sirdoonka u sareeya gumeysiga ee hada ka hor la baxay Ina ilay. Sirdoonka Woyanaha ayaa kaxaystay eegana Ninka heysta ciidamada Magaalada Jig Jiga oo qabiil ahaan kasoo jeeda Tigreega. Sababta Ninka woyanaha ah loo kaxaystay ayaan illaa hada la ogeyn waxaana loo badinaya innuu kow ka ahaa saraakisha xidhiidhka kowaad la leh cabdi UBO. Sarkaalkan ayaa saacado badan lala galay wareysi kadibna waxaa loo qaaday Adis.
Magaalada Jig Jiga ayaa wali waxaa kusugan Ciidamada Woyanaha ee gaarka u ah TPLF. Waxaana fiidki magaalada Jig Jiga ay gashaa Bandow.
Wali Cabdi UBO ayaa u xareysan Sirdoonka Woyanaha oo wali lasii deyn. Qabashada Generaalkan ayaa xaalada Jig Jiga kasii dhigaysa mid aan la qiyaasi karin. Waa markii u horeysay ee Woyanuhu olole noocan oo kale ah ay ku qaadaan adeegayaashisa iyo Saraakiisha ku sugan Ogaden.
Sarkaalkan heystay Ciidamada Woyanaha ee la kaxeystay ayaa kamid aha saraakisha Woyanaha ee xasuuqa Ogadeniya amarada ku bixin jiray.
Warbaahinta Caalamka ayaa gacanta ku dhigtay siro badan oo maqal iyo muuqaal ah xadgudubyo ciidanka Woyanuhu geysanayaan iyo Liyuu poliska kuwaas oo muujinaya falalka foosha xun ee bani aadamka ka baxsan. Waxaana loo maleynaya in taliska TPLF uu rabo innu talaabo ka qaado si xidhiidhkisa ree galbeedka u ilaashadaan oo soo xumaaday sanadihi u danbeyay.
Gumeysiga ayaad mooda inay garwaaqsadeen inay ku fashilmeen dhulka Ogaden iyo tabihii hore ee shacabka loola dhaqmi jirayna aysan sii socon karin. Shacabweynaha somalida Ogadeniya ayaa adeyg iyo bisayl badan muujiyay oo ay ugu dhabar adeegayaan ladaggaalanka Gumeysiga si kasta oo loo xasuuqo.
Ciidamada Woyanaha ayaa wali kawada Xasuuq aad u ba’an dhulka Ogadeniya iyaga oo meelo badan dad ku laayay. Xasuuqa shacabka ee ogadeniya kasocda ayaa waxaa kamida Xasuuqi Doolo 06 september ka dhacay.
Lasoco ONA waxii kasoo kordha